Urume Cannabis Oligopeptide Powder - Mugadziri Fekitori
Semen Cannabis Oligopeptide powder idiki mamorekuru peptidi yakatorwa kubva mumbeu cannabis peptidi neepasi-tembiricha yakaoma enzymatic hydrolysis. Iyo yakapfuma muarginine, glutamic acid, histidine, methionine, cystine. Zvakare, hazvizokonzeresa kuti dumbu kutenderera, kusvotwa uye kusagadzikana kwekuita.
Urume Cannabis Oligopeptide Powder vhidhiyo
Urume Cannabis Oligopeptide Powder Magadzirirwo
Product Name Urume Cannabis Oligopeptide Powder
ruvara Yero kana Chiedza yero
Chii chinonzi Semen Cannabis Oligopeptide powder?
Parizvino, urume cannabis oligopeptide powder yainyanya kushandiswa kumunda wehutano hwekudya chikafu uye chinoshanda chikafu.
Ndezvipi zvakanakira Semen Cannabis Oligopeptide powder?
Simbisa iyo spleen uye yekugaya system
Urume cannabis peptide upfu inogona kudzora chiyero chemukati mezvirimwa, iyo ine nzira mbiri dzekurapa maitiro pakuzvimbirwa uye manyoka. Panguva imwecheteyo, ine yakanaka anti-ulcer uye nduru inosimudzira mhedzisiro.
Urume cannabis peptide poda ine yakasimba analgesic uye anti-nfigueatory mhedzisiro.
Batsira mu hypolipidemic uye hypoglycemic
Urume cannabis peptide upfu inogona kudzora serum yakazara cholesterol uye triglyceride mazinga, pamwe neshuga yeropa. Iyo zvakare ine mhedzisiro yekugadzirisa eropa lipids uye shuga yeropa.
Anti-kuneta uye kugadzirisa hutachiona
Urume cannabis peptide upfu hunogona kuvandudza kurovedza muviri kutsungirira, kuwedzera chiropa glycogen zvemukati, kuderedza ropa lactic acid, ropa urea senitrogen zvemukati, ine antifatigue maitiro; Uye zvakare, inogona kuvandudza zvakanyanya humoral immune mashandiro emagetsi emagetsi, kunyanya kugona kwekuwedzera kweTlymphocyte uye phagocytes, uye yakazara-ly inowedzera immune immune yemuviri.
Urume cannabis peptide upfu ine antioxidant basa, iyo inogona kunyatso kutsvagisa mahara radicals uye kudzikisira iyo mwero we lipid peroxide, nekudaro inotamba antiaging athari.
 Iyo Pharmacological Chidzidzo cheDigestive System yeHemp Kerne
 Kugadziriswa, Kurwisa-kurwisa, Antithrombotic Mhedzisiro yeHemp Mbeu.
 Mhedzisiro yeHemao Protein Powder paNutritional and Physiological Functions of Rats in Growing Season.
 Chekutanga Kudzidza pane Anti-kuneta uye Immune RegulationKushanda kweHemp Mbeu Protein muMakonzo.
 Antioxidant Chiitiko cheEnzymatic Hydrolysis Zvigadzirwa zveHemp